Ku koray lamadegaanka? Maaha fikrad waali ah, waa wax horay loo qabtay | Saadaasha Shabakadda
Dhul oomane ah, roob yarna leh, qalalan ... Maaha wax inta badan lala xiriirinayo dhirta, ka-hadalka wax-ka-sheegga. Laakiin haa, waa dhaqan dhab ah, oo la qabanayo, oo aad uga badan inta laga yaabo inay u muuqato mudnaan. Waxsoosaarka lamadegaanka ayaa si isa soo taraysa loogu soo bandhigayaa bedel ahaan si loo helo dad ku nool dhulka saxaraha ah. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu sameeyaa tamar dib loo cusboonaysiin karo, sidaas darteed saameynta wasakheynta ayaa loo yareeyay ugu yaraan.
Laga soo bilaabo Ka faa'iideyso huurka, gaadiidka biyaha iyo xitaa biyaha badda. Midka ugu dambeeyay waxaa laga helay Qatar, waxaa loogu magac daray "Mashruuca Kaymaha Saxaraha".
1 Mashruuca Kaymaha Saxaraha
1.1 Riyo la gaadhay
2 Iskaashatada Sekem
Mashruuca Kaymaha Saxaraha
Mashruucani wuxuu inta badan ku saabsan yahay ka faa'iideysiga mid ka mid ah ilaha ugu badan ee Qatar, kuleylka. Xarumaha waxay leeyihiin oo leh warshad tamarta qorraxda isku urursan. Tan waxay ku gaarayaan tallaabada ugu horreysa, kuleylka uumi uumi. Kadib, iyada oo loo marayo marawaxadaha iyo matoorrada, waxaa loo beddelaa koronto. Marka biyaha badda ayaa markaa la shubi karaa oo loo isticmaali karaa in lagu qaboojiyo guryaha lagu koriyo.
cunt biyaha macaan, ee ka dhasha qashinka guryaha lagu koriyo, dib ayaa loo isticmaalay waraabka dhirta bannaanka taal. Xayndaabyada si istiraatiiji ah loogu beeray banaanka ayaa sidoo kale ka caawiya inay sifeeyaan wixii biyo ah ee xad-dhaaf ah, sidaas awgeedna abuuraya jawi qoyan oo qabow oo lagama maarmaan u ah dhirta iyagoo kaashanaya dabaysha
Waxay ahayd mid hami badan oo aan caadi ahayn, in inta badan kaqeybgaleyaasha mashruucu ay udhaxeeyeen xamaasad iyo shaki sidii ay ugu dambeyn u gaari lahaayeen himilooyinkooda. Wuxuu bilaabay mashruucan dhawr sano ka hor, iyo maanta durba si fiican ayaa loo hirgaliyay oo si sax ah ayuu u shaqeeyaa.
Riyo la gaadhay
Neil Crumpton, oo ah Madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee Planet Hydrogen, wuxuu xaqiijiyay in mashruucani leeyahay awood uu wax ku badali karo. «Dhibaatooyinka ugu muhiimsan maanta waa isbedelka cimilada iyo kheyraadka biyaha adduunka oo dhan Tiknoolajiyadaan fudud ayaa wax ka qaban kara labada dhibaato. Kama caawin karo laakiin waxaan u maleynayaa in tani ay tahay aragti oo aysan aheyn dhayro.
Sidoo kale waa in lagu daraa in Qatar, oo leh awooddeeda dhaqaale ee weyn, ay maareynayso inay u bedesho qaab aan horay loo arag. Khubarada kale, dhanka kale, si buuxda uma hubo in tani runti ay tahay sida saxda ah ee wax lagu sameeyo. Maalgelinta xarumaha kaliya ayaa ku kacday 5 milyan oo doolar. Patrick González, cilmiga deegaanka kaasoo la soo shaqeeyay Jaamacadda California ee Berkeley, xoogaa ayuu ku adkaaday arrintaas. «Isla caasimadaas, waxaad ku soo celin laheyd nidaamka deegaanka iyo ka caawinta dadka si wax ku ool ah iyada oo loo marayo maaraynta bulshada ee kheyraadka dabiiciga ah. '
Beeraha beeraha iskaashatada Sekem
40 sano ka hor, Ibrahim Abouleish, wuxuu aasaasay iskaashato Masaari ah koofurta Qaahira, Sekem. Ibrahim, oo haysta Abaalmarinta Nobel Prize-ka ee 2003, wuxuu rabay inuu ka hor maro waqtigiisa. Isaga laftiisa ayaa xaqiijiyay in gorgortanka loo soo qaaday sidii "Qaab-dhismeedka qarniga XNUMX-aad kaas oo ah guusha ganacsiga iyo horumarka bulshada iyo dhaqanka ee bulshada lagu mideeyo iyada oo loo marayo dhaqaale kalgacal." Taasi waxay ahayd guusha markii la is barbar dhigo, markii Mashruuca Sahara la bilaabay, Sekem waxay horey u lahayd toddobo shirkadood iyo shaqaale ka kooban 2.000 oo shaqaale.
Sekem maanta waxay soo saartaa cunno dabiici ah, waxay kaloo soo saaraan badeecooyin caafimaad iyo dhar. Dhammaan shirkadaha ku hoos jira dabeecadda deegaanka iyo tayada wax soo saarkooda, waxaan ka helnaa qaar u muuqda inay xitaa ka soocan yihiin beeraha saafiga ah. Atos, taasi waa magaca mid u heellan soo saarista daawooyinka caafimaadka, waxaana ku jiraa alaab ka dhan ah kansarka. Sekem oo ay sii dheertahay inay leedahay Akadamiyadeed u gaar ah shaqaalaha, bilaabay jaamacad dawli ah. Tusaale weyn oo ah riyadii Ibraahim uu raadinayey.
Waxaan sidoo kale ka heli karnaa tusaalooyin intaa ka sii badan dalal kale, sida Liibiya, ama qaar hadda ka sii horreeya hoggaanka qaybta, sida Israel Laakiin sidoo kale ma ogtahay in ka dhanka ah isbeddelka cimilada, ay jiraan farsamooyin kale oo beeraha ah, sida, Beeraha Ilaalinta?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ku koray lamadegaanka? Maaha fikrad waali ah, waa wax horay loo qabtay